युवा अणु NAD +: मानव स्वास्थ्य मा एक महत्वपूर्ण Coenzyme
युवा अणु NAD +: एक Coenzyme कि मानव स्वास्थ्य मा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ
कहिल्यै सुनेका निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइनुक्लियोटाइड (NAD +) वा "युवावस्था" उचित पोषण र व्यायामको साथ तपाईको शरीर सामान्यत: इष्टतम मेटाबोलिज्मको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ।
दुर्भाग्यवस, एक बिरामी, बृद्ध उमेर र / वा स्वास्थ्य बिरूद्ध जीवनशैलीको साथ, तपाईंको शरीरले विभिन्न कमिहरूको अनुभव गर्न थाल्छ जुन यसको कार्यक्षमता उल्लेखनीय रूपमा खस्कन्छ। निम्न निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड (NAD +) स्तर यी कमिहरू मध्ये एक हो, र त्यो त्यहि हो। NAD + पूरक अभाव अन्तरमा बन्द गर्न को लागी उपयोगी छ, विशेष गरी स्वस्थ बुढेसकाल प्रक्रियालाई बढावा दिन।
निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड (NAD) दुबै एडेनाइन कोन्जाइमलाई जनाउँछ र निकोटीनामाइडe। कुनै पनि जीवित सेलले यो रासायनिक यौगिक समावेश गर्दछ, जो निकोटीनामाइड रिबोसाइडको व्युत्पन्न हो। मानव शरीरमा NAD का स्तरहरू उसको उमेरको दरलाई प्रभाव पार्दछ।
त्यहाँ दुई प्रकारका एनएडी हुन्छन्, अर्थात्, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड (एनएडी +) र निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुकाइओटाइड (एनएडी) + हाइड्रोजन (एच) (एनएडीएच)। पहिलेकोसँग दुई थप इलेक्ट्रोनहरू छन्, र त्यो यो पछिल्लो भन्दा फरक सेट गर्दछ।
NAD के हो?
निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड (NAD +) एक पाइराइडिन न्यूक्लियोटाइड हो जुन अहिलेको छ र हरेक जीवित कोषमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस पाइराइडिन न्यूक्लियोटाइडले धेरै जैविक प्रक्रियाहरूलाई मद्दत गर्दछ जहाँ यसले कुञ्जी कोफेक्टरका साथै सब्सट्रेटको रूपमा काम गर्दछ। यी प्रक्रियाहरूमा ऊर्जा उत्पादन, स्वस्थ डीएनए मर्मत र मर्मत, इम्यूनोरेगुलेसन र जीन अभिव्यक्ति समावेश छ। त्यो NAD + एजिंग साइन उल्टो पावर वर्णन गर्दछ।
NAD + ले माध्यमिक मेसेन्जर सaling्केतनका साथै इम्युनोरग्यूलेटरी प्रकार्यहरूमा पनि अभिन्न भूमिका खेल्दछ।
युवा अणुको रूपमा, NAD + बुढेसकालको प्रक्रियामा एक प्रमुख कारकको रूपमा पहिचान गरिएको छ। बिभिन्न अध्ययनहरूले स्थितिलाई समर्थन गर्दछ कि मानव शरीरमा NAD + स्तर एक व्यक्तिको जवानी संग सीधा सम्बन्ध छ। NAD + स्तर जति माथि छ, कडा शरीर कोशिका, टिशू र सम्पूर्ण शरीरको दृष्टिकोण। त्यो NAD + बुढेस उल्टो लोकप्रियता को आधार बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, NAD + को कमीले थकान र विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै, पर्याप्त NAD + स्तरहरू निस्सन्देह एक व्यक्तिको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
NAD कसरी काम गर्दछ?
जब तपाईंको शरीर स्वस्थ एन्जाइम र हर्मोन उत्पादन स्तर प्राप्त गर्न असक्षम हुन्छ, यसले विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दाहरू जस्तै चपलता, मेमोरी मुद्दाहरू र कम सोचाइको दर प्रकट गर्न सुरू गर्दछ। यो किनभने यसले शरीर कोषहरूको सामान्य उत्थान र कार्यलाई समर्थन गर्न पर्याप्त NAD + र NADH स्तरहरूको अभाव गर्दछ।
विशेष गरी, कुञ्जी NAD + प्रकार्य रेडक्स प्रतिक्रियाको रूपमा चिनिने प्रक्रिया मार्फत अणुबाट अर्कोमा इलेक्ट्रोनको स्थानान्तरण सक्षम गरेर, शरीरको चयापचय प्रतिक्रियालाई समर्थन गर्नु हो। रेडॉक्स प्रतिक्रियाहरू मार्फत, पोषकहरूले कमजोर डबल अक्सिजन बन्धनमा भण्डार गरिएको उर्जालाई खाली गर्न सक्षम हुन्छन्।
सामान्यतया, तपाईको शरीर कोशिकालाई रगत प्रवाहबाट उर्जाको आवश्यक हुन्छ बिभिन्न विभिन्न चयापचय कार्यहरू गर्न। विशेष रूपमा, उनीहरूलाई चाहिने उर्जा फ्याट्टी एसिड र ग्लुकोजको रूपमा भण्डारण गरिन्छ। त्यसो भए, यहाँ एनएडी + एन्जाइमको प्राथमिक भूमिका रक्त स्रोतबाट सम्बन्धित कोषहरूमा उर्जा स्रोतहरूको ढुवानी गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हो।
जब फ्याटी एसिड र ग्लूकोज रिलीज ऊर्जा हुन्छ, NAD + इन्जाइमले सेलुलर ऊर्जामा थप रूपान्तरणको लागि ऊर्जाको माइटोकन्ड्रियामा ढुवानी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अन्यथा, NAD + अभाव को मामला मा, कोशिका मा ऊर्जा को स्थानान्तरण अवरुद्ध छ, र यो माइटोकन्ड्रियल डिसफंक्शन, जो बुढेसकाल प्रक्रिया लाई गति पैदा गर्दछ।
प्रत्येक NADH का लागि, NAD + ले तीन ATP अणु उत्पन्न गर्न सक्षम छ। कोषहरूको शक्तिको नतिजाको रूपमा, तपाईं मानसिक र शारीरिक दुवै दुबै ऊर्जावान बन्नुहुन्छ किनकि एनएडी + ले तपाईंको उमेरसँग सम्बन्धित जैविक प्रक्रियाहरूलाई अक्सीकरणको माध्यमबाट प्रोत्साहित गरेको छ।
विशेष रूपमा, मुख्य NAD + प्रकार्य शरीरमा redox प्रतिक्रियाको लागि जिम्मेदार एन्जाइम सक्रिय छ। यी एन्जाइमहरूलाई सामूहिक रूपमा ऑक्सीडोर्याडेक्ट्स भनिन्छ। तिनीहरूमा Sirtuin एन्जाइमहरू (SIRT), पाली- ADP-ribose polymerases र चक्रीय ADP ribose हाइड्रोलेज (CD38) सामेल छन्।
Sirtuin सक्रियतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यो ध्यान दिएर लायक छ कि sirtuin एन्जाइमको प्राथमिक कार्य बुढेसकालमा सुविधा पुर्‍याउने जीनहरू बन्द गर्नु हो। जीनहरूले तीनहरू समावेश गर्दछ जुन फ्याट संश्लेषण र भण्डारण, ईन्फ्लेमेसन र रगतमा चिनीको नियमनमा भाग लिन्छन्। सिर्टुइन एन्जाइमहरू प्राप्त गर्नका लागि, उनीहरूलाई एनएडी + एन्जाइमहरू चाहिन्छ किनकि यी एनएडी अणुहरूले परिमार्जनका लागि प्रोटीनहरूबाट एसिटाइल समूहहरू निकाल्न मद्दत गर्दछ।
तसर्थ, NAD + स्तरमा वृद्धि सक्रिय Sirtuins को एक उच्च संख्या मा अनुवाद। यसले बढि mitochondrial श्वासको साथ साथै बृद्धि गरिएको इन्सुलिन संवेदनशीलतामा परिणाम दिन्छ।
त्यस्ता मेटाबोलिज्म सुधारहरूको प्रभाव दिमागको बढ्दो उमेरको प्रभावलाई उल्टो पार्दछ, NAD + बुढाई उल्टो शक्तिलाई धन्यवाद। साथै, सुधारिएको इन्सुलिन संवेदनशीलताले तपाईंको शरीरलाई स्वस्थ रगतमा चिनीको स्तर कायम राख्न मद्दत गर्दछ। नतिजा रूपमा, तपाइँको शरीर कोशिका कपाल देखिन्छ र अधिक जवानीमा व्यवहार, तपाइँ एक सामान्य अधिक युवा देखिने साथ साथै।
थप रूपमा, NAD + लाई एक अणुको रूपमा पहिचान गरियो जुन बाह्य सेल्युलर सaling्केली forको लागि उल्लेखनीय रूपमा जिम्मेवार छ, जुन सेल-देखि-सेल संचारको आधार बनाउँदछ। साथै, यसले उपन्यास न्यूरोट्रान्समिटरको रूपमा काम गर्दछ, स्नायु मांसपेशी अंगहरूको प्रभावकारी कोशिकाहरूमा स्नायुहरू बाट जानकारी सार्दै।
NAD को लाभ / समारोह
त्यहाँ धेरै छन् NAD + लाभहरू र कार्यहरू समावेश:
१. उमेर सम्बन्धित डीजेनेरेटिव अवस्थाबाट संरक्षण
एनएडी + एन्टी एजिंग बेनिफिटहरू स्वास्थ्य-सचेत व्यक्तिले आफ्नो NAD + स्तरहरू सबै समय स्वस्थ हेर्नको प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो। मानिस उमेर बढ्दै जाँदा, उनीहरूको डीएनए क्षति बढ्छ, र यसले एनएडी + स्तरहरू घटाउने कारण गर्दछ, SIRT1 गतिविधि गिरावट र माइटोकोन्ड्रियल समारोह कम भयो। सेलुलर ऑक्सीडेटिव तनावको कारणले यस्तो हुन्छ, जुन सामान्य व्यक्तिको भाषामा हुन्छ भन्ने हो शरीरको एन्टिऑक्सिडन्टहरू र स्वतन्त्र रेडिकलहरू सन्तुलनमा छैनन्।
फलस्वरूप, एक वृद्ध व्यक्ति विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्तै एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदय रोग, गठिया, मोतियाबिन्द, मधुमेह र उच्च रक्तचाप, को लागी धेरै संवेदनशील।
भाग्यवस, धेरै अनुसन्धानले देखाउँदछ कि NAD + ले शरीर कोशिकालाई अक्सिडेटिभ तनाव संरक्षण प्रदान गर्दछ। त्यसकारण, एनएडी + फूडहरू, पूरकहरू लिने वा अन्य एनएडी + स्तर सुधार हस्तक्षेपहरू अपनाउँदा बुढेसकालका व्यक्तिहरू, विशेष गरी 50० बर्ष भन्दा माथिका उमेरहरूलाई राम्रो स्वास्थ्य कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ पृथ्वीमा उनीहरूको रहन बढ्ने क्रममा पनि।
थप एनएडी + ले कार्यक्षमता सुधार गर्दछ र माइटोकन्ड्रियाको विकासलाई समर्थन गर्दछ। यसले कोषहरूमा पर्याप्त एटीपी स्तरहरूको मर्मतको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जुन अन्यथा उन्नत वृद्धावस्था द्वारा सम्झौता गरिएको थियो।
२. थकान राहत
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार NAD + ले तपाईंको शरीरको mitochondria को उर्जा उत्पादन क्षमता समर्थन गर्दछ। जब तपाईंको माइटोकन्ड्रियाले पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्दैन, हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशीहरू र फोक्सो जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरूले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न असमर्थ छन् र यसले थकान र कम प्रेरणा निम्त्याउँछ।
अर्कोतर्फ, जब तपाईंको शरीरमा पर्याप्त NAD + स्तर छ, यी अंगहरू स्वस्थ तहहरूमा प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् र नतिजाको रूपमा, तपाईं उत्साहित, प्रेरित, जीवन्त र स्पष्ट दिमागको साथ महसुस गर्नुहुन्छ। प्रत्येक जीवित कोशिकालाई यो कोइन्जाइम आवश्यक छ किनकि यसले एडेनोसिन ट्राइफोस्फेटको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
कक्षहरूले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रयोग गर्दछ उर्जा उत्पादन गर्न जुन तपाईंको बिभिन्न अंगहरूले चाहिएको प्रदर्शनको लागि आवश्यक छ। जब तपाईंको शरीरलाई शक्ति दिईन्छ, तपाईंको कोषहरू सामान्य थकान भावनाहरूसँग प्रभावी रूपमा लड्न सक्षम हुन्छन्।
3.सुधारिएको दिमाग समारोह
थकानले तपाईंको संज्ञानात्मक प्रकार्य सुस्त बनाउँछ। यसले तपाईलाई महसुस गराउँछ यदि तपाईको दिमाग अन्धकार छ वा बादल हो। यद्यपि हामीले पहिले नै देख्यौं कि NAD + ले थकान राहत प्रदान गर्दछ। त्यसो भए, कोएन्जाइमले तपाईंको मस्तिष्क कोषहरूको लागि पर्याप्त उर्जा उत्पादन ट्रिगर गरेर तपाईंको मस्तिष्कको कार्यलाई बढावा दिन्छ, उनीहरूलाई थकानुर्वाट लड्न सक्षम गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाईको दिमाग अधिक सजग र शक्तिवान हुन्छ विभिन्न कामहरू सम्हाल्नको लागि तपाईलाई सोच्न आवश्यक पर्दछ।
I. सुधारिएको सेल तनाव प्रतिरोध
एउटा अध्ययनमा सेलुलर ऑक्सीडेटिव तनावमा NAD + को प्रभाव स्थापना गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि NAD + उपचार प्रयोगशाला कोशिकालाई बढी तनाव प्रतिरोधी बनाउँदछ। अर्कोतर्फ, NAD + को साथ आपूर्ति नभएको कोषहरू ऑक्सीडेटिव तनावको शिकार भए। त्यसकारण यसको मतलब यो हो कि यस कोएन्जाइमले तपाईंको शरीरको कोशिकाको आयु बढाउँदछ, तपाईंको शरीरलाई विभिन्न रोग निम्त्याउने जीवहरूसँग बढी प्रभावकारी रूपमा लड्न मद्दत गर्दछ।
D.DNA लामो आयुका लागि मर्मत गर्नुहोस्
तपाईंको दैनिक-दिनको जीवनमा, तपाईं विभिन्न चीजहरू र सर्तहरूको सामना गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको DNA लाई नोक्सान पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ। बिग्रिएको डीएनए तपाईंको आयु छोटा पार्छ। यद्यपि तपाईको शरीरमा NAD + को पर्याप्त आपूर्तिका साथ, यी coenzymes ले क्षतिग्रस्त मर्मतको मर्मतको सुविधा पुर्‍याउँछ क्षतिग्रस्त मर्मतको मर्मतको लागि इलेक्ट्रोनहरूलाई क्षतिग्रस्त DNA भएको ठाउँमा सार्न। यो धेरै अध्ययनहरूको अनुसार छ जुन यस निष्कर्षको साथ आएको छ कि NAD को पुनःपूर्तिले जनावर वा मानवको आयु विस्तार गर्दछ।
6. राम्रो निद्रा र खाने तालिका
बिभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि NAD + ले एक व्यक्तिको निद्रा चक्रको साथसाथै भोक बान्कीमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्दछ। तपाइँ सामान्य रूपमा सुत्ने वा उठ्ने समय र तपाइँको सामान्य दिनको सामान्य प्रवाह तपाइँको हृदय तालमा निर्भर गर्दछ। र, तपाईंको शरीरमा भोक हार्मोनको उत्पादन अत्यधिक रासायनिक यौगिकबाट प्रभावित छ।
Sirtuins र को बिचमा उचित परस्पर सम्बन्ध NAD + परिणामहरू एक स्वास्थ्य कार्डियक ताल र भूखमा। अन्यथा, NAD + वा sirtuins को अवरोधको कारण अस्वास्थ्यकर सर्काडेन ताल हुन्छ, यसैले नराम्रो खानपान र निद्रा बान्की। तसर्थ, NAD + एक स्वस्थ निद्रा र खाने तालिकाको लागि काममा आउँछ। यी दुई चेक मा संग, तपाईलाई स्वस्थ तौल प्राप्त गर्न र राख्न यो सजिलो हुनेछ।
माथिका सबै लाभदायक कार्यहरू प्रदान गरेर, त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि NAD + ले व्यक्तिहरूलाई एक बढ्दो उमेरमा पनि स्वस्थ जीवन जीउन सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अनुप्रयोग / NAD को उपयोगहरू
१. सुधारिएको शिक्षण र मेमोरी क्षमता
धेरै व्यक्तिहरू जान्दछन् कि यो रासायनिक यौगिक प्राकृतिक प्रस्ताव गर्दछ
मस्तिष्कमा न्यूरल मार्गहरूको बहाली र सुधार।
यसका साथै यसले मानसिक र सामान्य थकान हटाउँछ, जसले मानसिक स्पष्टता सुधार गर्दछ।
नतिजाको रूपमा, एक सिक्न र अधिक कुशलतापूर्वक सम्झन सक्षम छ।
२. टिकर न nails र कपाल
नails र कपाल प्राय: एक व्यक्तिको सौन्दर्य परिभाषित गर्नका लागि देखिन्छ, विशेष गरी महिला क्षतिग्रस्त डीएनए मर्मतको प्रबर्धन गर्न यसको क्षमताको कारण, NAD + बाक्लो नाखून र कपालको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै, यो ती पातलो कपाल र / वा न .हरूको बारेमा चिन्तित व्यक्तिहरूको लागि धेरै खोजी गरिएको रासायनिक यौगिक हो।
3. राम्रो छाला स्वास्थ्य
व्यक्तिहरूको बीच बढ्दो उमेर छाला त्रुटिहरू जस्तै झुर्रीहरू, फाइन लाइनहरू र असमान रंगको साथ आउँदछ। जहाँसम्म, ती उमेरका संकेतहरूको अवहेलना गर्न चाहनेहरूले एनएडी + पूरकहरू लिन्छन् जुन उद्देश्यका लागि राम्रोसँग काम गर्दछन्। को एनएडी + एंटी एजिंग लाभ धेरै लोकप्रिय छ।
M.मासल समारोह सुधार
मान्छे को उमेर को रूप मा, तिनीहरू छोटो र कमजोर हुन्छन् किनभने मांसपेशिको डिसफंक्शन जुन बुढेसकालको साथ आउँदछ। जे होस्, ती जसले NAD को एन्टि-एजिंग पावर पत्ता लगाएका छन् + यसमाथि लि muscle्याउँदछ आफ्नो मांसपेशिको प्रकार्य सुधार गर्न।
Age. उमेर सम्बन्धित रोगहरुको रोकथाम
थप रूपमा, वृद्ध उमेरका कारण उनीहरूको शरीरमा NAD + को कम आपूर्ति हुने व्यक्तिहरू रासायनिक यौगिकको बाहिरी स्रोतहरूको खोजी गर्दछन् उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रतिरोध गर्न। एंजाइमको थप आपूर्तिले उनीहरूको शरीरलाई बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित विभिन्न बिरामीहरूको प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सक्षम गर्दछ।
NAD + खुराक
जे होस् NAD + एक प्राकृतिक कम्पाउन्ड हो, यो मध्यमसँगै लिनु पर्छ। खाद्य र औषधि प्रशासन एजेन्सीका अनुसार (एफडीए), सबैभन्दा सुरक्षित NAD + खुराक प्रति दिन अधिकतम दुई ग्राम छ। उपचारको सिफारिश अवधि to देखि १ days दिन, प्रयोगकर्ताको मेडिकल ईतिहासमा निर्भर रहन्छ।
खसेको NAD + स्तरहरूको परिणामहरू
यो सबैका लागि पक्का छ कि यो सुनिश्चित गर्न को लागी उनीहरूसँग पर्याप्त NAD + स्तरहरू छन्। बढ्दै
NAD + अभाव अनुभव गर्ने व्यक्तिको लागि NAD + स्तर आवश्यक छ। यो किनभने NAD + को कमी सहित धेरै अवांछनीय परिणामहरू छन्:
1. बुढेसकालका लक्षणहरू
एक जवान व्यक्तिमा, NAD + र NADH उमेरका मानिसहरूमा फेला परेको स्तरको तुलनामा बढी मात्रामा हुन्छन्। उमेरको साथ NAD + स्तर कम गर्ने SIRT1 गतिविधि कम गर्न को लागी, यसैले बुढेसकाल को लक्षण को घटना को गति। यस्तो अवस्थामा, ती संकेतहरूलाई उल्टाउन वा रोक्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको शरीरमा NAD + को स्तर बढाउनु हो। Coenzyme Boost को साथ अधिक SIRT1 गतिविधि ट्रिगर गर्दछ, यसैले अधिक पुनरुद्धारित शरीर दृष्टिकोण र भावना।
हाइपोक्सिया एक यस्तो अवस्था हो जुन मानव शरीरमा कम अक्सिजन आपूर्ति द्वारा विशेषता हो। अवस्थाले बढ्दो NADH र कम NAD + ले पुग्छ र यो छालाको विकृति, भ्रम, ढिलो मुटुको धड्कन, सास फेर्न गाह्रो, पसिना र लगातार खोकी जस्ता लक्षणहरूले देखाउँदछ।
व्यक्ति जो hypoxia बाट पीडित छन् आफ्नो NAD + स्तर बढाउँदै लक्षणबाट राहत पाउन सक्दछन्। जो अवस्थाको उच्च जोखिममा छन् उनीहरूले आफ्नो NAD + स्तर बढाएर उनीहरूको संवेदनशीलता कम गर्न सक्दछन्।
3. सनबर्न र छालाको क्षति
घाम लाग्न वा घाममा घाम लाग्न सक्छ कि घामको प्रकाशको परिणाम स्वरूप? NAD + र NADH तपाईं कभर भयो। दुबैले सूर्यबाट तपाईंको छाला सुरक्षाको साथसाथै UVB र UVA स्पेक्ट्रमहरू शोषण गरेर छालाको क्यान्सर प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं रहस्यमय थकान र सामान्य शरीर कमजोरी अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कम NAD + स्तर हुन सक्छ, यसैले SIRT1 गतिविधि कम भयो। यस्तो अवस्थामा, NADH वा NAD + पूरकले mitochondria कार्यलाई बढावा दिएर थकानका लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ।
5. मेटाबालिक सिंड्रोम
Sirtuins को सक्रियताको माध्यमबाट, NAD + ले अप्रत्यक्ष रूपमा मेटाबोलिज्म-प्रभावकारी जीनहरूको कार्य सुधार गर्दछ। जस्तो कि, कम मेटाबोलिज्मको कारणले वजन ब्यबश्थापनको समस्या भएका व्यक्तिहरूले एनएडी + मार्फत उनीहरूको चाहिएको वजनको स्तर प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो तपाईको लागी एक प्रभावकारी समाधान हुन सक्छ यदि तपाई मेटाबोलिज्म-समझौता अवस्थाको परिणाम स्वरूप अस्वास्थ्यकर तौल बढ्ने वा उच्च LDL कोलेस्ट्रोलको डर लाग्नुहुन्छ भने।
6. मुटु रोगहरु
शरीरमा NAD + प्रकार्यले mitochondria गतिविधि प्रभावित गर्दछ, जुन मुटुको उचित कार्यको लागि महत्वपूर्ण छ। रासायनिक यौगिकको अभावले मुटुको विफलतालाई गति दिन सक्छ, यस्तो चीज जुन कसैले अनुभव गर्न चाहँदैन। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग निकोटिनमाइड एडेनिन डिन्यूक्लियोटाइड (एनएडी +) स्तर छ भने, ईस्केमिया-रिप्रफ्यूजन चोटपटक वा कुनै अन्य हृदय रोगको परिणाम स्वरूप, तपाईं राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईंको मुटुको स्वास्थ्य कोइन्जाइमको आपूर्ति बढाउँदा तपाईंको शरीरमा सुधार हुनेछ।
7. एकाधिक Sclerosis (एमएस)
मल्टिपल स्क्लेरोसिसबाट पीडित हुनुहुन्छ? यदि हो भने, त्यसोभए तपाईंले NAD + पाउडरको फाइदाहरूमा ट्याप गर्न विचार गर्नुपर्छ NAD + पूरक रोग लक्षण राहत को लागी सेवन।
मल्टिपल स्क्लेरोसिस प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा कम NAD + स्तर द्वारा विशेषता हुन्छ जबकि स्नायु प्रणालीले नै यसको कमीको अनुभव गर्दछ। एनएडी + पूरकले स्नायु प्रणालीमा रासायनिक यौगिकको अभावलाई कम गर्दछ, यसैले तपाईंको एमएस लक्षणहरू सुधार गर्दछ।
8. मानसिक स्वास्थ्य र न्यूरोडोजेनेरेटिव अवस्थाहरू
यदि तपाइँ एक मानसिक स्वास्थ्य वा न्यूजोडिजरेटिभ अवस्था जस्तै अल्जाइमर रोग, पार्किन्सन रोग वा स्ट्रोकको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, NAD + पूरक तपाईंको स्वास्थ्यको पुनर्स्थापनाको लागि काममा आउँछ। यो किनभने यी सर्तहरूको कारण छ NAD + अभाव, तपाईंको मस्तिष्क ऊर्जा र डोपामाइन घटाउने नेतृत्व। किनकि मस्तिष्क उर्जा र डोपामाइन तपाईको मानसिक र स्नायु प्रणालीको मुख्य अंश हो, तपाईको लक्षणहरु झन् झन् खराब हुन सक्दछ यदि तपाईले तपाईको NAD + स्तर बढाउने उपाय खोज्नु भएन भने।
प्राकृतिक रूपमा NAD स्तरहरू कसरी बढाउने?
1. शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन गर्दै
जब तपाईंको उमेर बढ्दै जान्छ, तपाईंको स्वास्थ्यको लागि शारीरिक व्यायाम आवश्यक छ। नियमित शारीरिक व्यायामको साथ तपाईको शरीरको एनएडी + उत्पादन गर्ने क्षमतालाई बढावा दिइन्छ। व्यायाम गर्न तपाईलाई ऊर्जा चाहिन्छ। तसर्थ, अधिक तपाईं व्यायाम, तपाईंको शरीर अधिक mitochondria उत्पादन उत्तेजित गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्दछ। फलस्वरूप, तपाईंको NAD + स्तर स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
जे होस्, उपवास मुख्य रूपमा धार्मिक समर्पणको एक तरीकाको रूपमा अभ्यास गरिएको छ, यसले विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरू पनि प्रदान गर्दछ, NAD + स्तर र SIRT1 सक्रियता सहित।
Sun. धेरै धेरै सूर्यको प्रकाशको सामना गर्दै
सूर्यबाट अल्ट्राभायोलेट विकिरणले तपाईंको छालाको बुढोलाई गति दिन्छ। अझ खराब कुरा, सूर्यको किरणको अत्यधिक जोखिमले स्टोरहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ जुन क्षतिग्रस्त छाला कोषहरूको मर्मतमा योगदान पुर्‍याउँछ। यसले NAD + स्तरमा कमी देखाउँछ। जस्तो कि, यो हुनबाट रोक्नको लागि र तपाईंको शरीरलाई स्वस्थ एनएडी + स्तर कायम गर्न सूर्यको किरणको अत्यधिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर जब तपाईं सक्नुहुन्छ। साथै, सूर्यको हानिकारक प्रभावबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् तपाईंको छालालाई गुणस्तरीय सनस्क्रीनले ढाक्दा जब तपाईं घमाइलो दिनमा बाहिर जानुहुन्छ।
4. NAD + पूरक लिदै
यद्यपि स्वस्थ सन्तुलित-पोषण पोषण हाम्रो शरीरमा इष्टतम एनएडी + आपूर्ति को मेरुदण्ड हो, कहिलेकाँही केहि अझ बढी गर्न को लागी। विशेष गरी, who० बर्ष उमेरका मानिसहरूलाई एक साधारण सन्तुलित आहारले भन्दा बढी NAD आवश्यक पर्दछ। यस अवस्थामा, NAD- संचार पूरकहरू काम आउँदछन्। यी पूरकहरू क्याप्सूलको रूपमा आउँदछन् र पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छन्। तिनीहरूमा भिटामिन बी contain (निकोटिनमाइड राइबोसाइड) हुन्छ जुन पछि शरीरमा NAD + मा परिवर्तन हुन्छ।
5. पर्याप्त निन्द्रा
हरेक दिन पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्नु एन्टी-एजिंग रासायनिक यौगिकको स्तर बढाउने अर्को प्राकृतिक तरिका हो। राम्रो निद्रा आराम तपाईंको शरीरमा जैविक ईन्जिनको उत्पादन लाई बढावा दिन्छ।
T. NAD + खाद्य पदार्थ लिदै
अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि, निकोटीनामाइड राइबोसाइडभिटामिन बी of को रूप, शरीरमा NAD + मा रूपान्तरण गर्दछ। कोएन्जाइमहरू, जसरी शरीरले उत्पन्न एनएडी + लाई पछि विभिन्न चयापचय प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गर्दछ जसको परिणामस्वरूप मानव शरीरमा बढ्दो प्रक्रियालाई ढिलो र उल्टाइन्छ। त्यस्तै रूपमा, यस भिटामिन (NAD + फूडहरू) भएको खाद्यहरूले उत्कृष्ट NAD + पूरक प्रदान गर्न सक्दछन्।
फूडहरू जसले निकोटिनमाइड राइबोसाइड समावेश गर्दछ, र जुन तपाईं आफ्नो NAD + स्तर सुधार्न गणना गर्न सक्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा समावेश गर्दछ:
दुग्ध दुध: अनुसन्धानले देखाउँदछ कि गाईको दुधको प्रत्येक लिटरमा NAD +9μmol हुन्छ।
माछा: केहि माछा प्रजातिहरू जस्तै ट्युना र सामन NAD + मा धनी छन्। टुनाको एक कपमा एनएडी + सामग्री सामनका लागि करीव २०..20.5mg र १०.१mg हो।
क्रिमिनी च्याउ: यदि तपाईं एक कप क्रिमिनी मशरूम लिनुहुन्छ भने, तपाईंले NAD + को 3.3mg को साथ आफ्नो शरीर आपूर्ति गरेको छ।
कुखुराको मासु: चाहे स्टिउइड, भुनी वा ग्रील्ड, एक कप कुखुराको मासु तपाईंलाई 9.1mg NAD दिन्छ।
खमीर खाना: यीस्ट डेअरी दुधको तुलनामा एक धनी NAD + स्रोत हो। तसर्थ, केक र रोटी जस्ता खमीर खानाहरू तपाईंको शरीरमा NAD + स्तर को पुनःपूर्ति गर्न योगदान गर्न सक्दछ। यद्यपि बियरले पनि कोएन्जाइमको स्रोतको रूपमा काम गर्न सक्छ, यो मध्यमसँग लिनु पर्छ।
हरियो शाकाहारीहरू: केही हरी तरकारीहरू पनि हुन् NAD + फूडहरू , विशेष गरी मटर र शतावरी, युवा प्रवर्धन रासायनिक यौगिक NAD + मा धनी छन्। एक कप मटरमा, 3.2.२mg NAD + हुन्छन् जबकि एक कप asparagus सँग २ mg कम्पाउन्ड हुन्छ।
केटोजेनिक आहार अपनाउने: केटो खानामा हुनुको अर्थ आफुलाई फ्याट तर कम कार्बमा रहेको खानामा सीमित गर्नु हो। जब तपाईं यो आहार अपनाउनुहुन्छ, तपाईंको शरीर केटोसिसको रूपमा परिचित राज्यमा प्रवेश गर्दछ जसमा यसले ऊर्जाको लागि ग्लूकोजको सट्टा चर्को प्रयोग गर्दछ। यसले NAD + लाई NADH अनुपात बढाउन बनाउँदछ।
NAD घटाउने केहि कारकहरू
निम्न एनएडी + स्तरहरू निम्न कारकहरू सहित हुन सक्छ:
1. जीर्ण सूजन
पुरानो सूजनले एनएएमपीटी एन्जाइम र सर्केडियन तालको लागि जिम्मेदार जीनहरूलाई निषेध गर्दछ। नतिजाको रूपमा, NAD + स्तरहरू खस्कन्छन्।
2. सर्काडियन ताल अवरोध
NAD + उत्पादनलाई NAMPT एन्जाइम आवश्यक छ, विशेष गरी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा। यद्यपि जब कसैको सर्काडियन ताल बिग्रन्छ, एन्जाइमको उत्पादनका लागि जिम्मेदार जीनहरू सम्झौता गरिन्छ र यसको परिणाम स्वरूप शरीरमा एनएडी + को उत्पादन कम हुन्छ।
3. रगतमा चिनी र इन्सुलिन तहको उच्च मात्रा
जब रगतमा चिनी र इन्सुलिनको स्तर अत्यधिक वृद्धि हुन्छ, NADH / NAD + अनुपात बढ्छ। यसको मतलब NADH को मात्रा NAD + स्तरको तुलनामा धेरै बढी छ।
4. मदिरा दुरुपयोग
धेरै अनुसन्धानले इथानोल तनाव देखाउँदछ को एक परिणाम को रूप मा दीर्घकालीन मदिरा सेवन NAD + स्तरमा करीव २०% कटौतीको कारण. यसको कारणले कि रक्सीले ट्रान्जिटरी ऑक्सीडेटिव क्षति निम्त्याउँछ जुन कोएन्जाइमको उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्दछ।
5. डीएनए क्षति
जब डीएनए व्यापक रूपमा बिग्रन्छ, अधिक PARP अणुहरू आवाश्यक हुन्छ
बिग्रिएको DNA को कार्यक्षमता मर्मत गर्नुहोस् र पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। अणुहरू भएदेखि
NAD + द्वारा संचालित, यसको मतलब यो हो कि उनीहरूको बढ्दो संलग्नता हुन सक्छ
पीडितको शरीरमा रासायनिक यौगिकको अभाव हेर्नुहोस्।
6. कम sirtuin गतिविधि
विचार गर्दा कि सिर्टुइनले सर्काडेन ताललाई नियमित गर्दछ, कम sirtuin ले स्तर सर्कडियन Ebb र प्रवाहमा सम्झौता गर्न सक्दछ। फलस्वरूप, NAD + स्तर कम हुन्छ।
NAD + को बारे मा कुनै साइड इफेक्ट छ?
धेरै जसो केसहरूमा, NAD + पूरक पूर्ण सुरक्षित हुन्छ। शरीरमा कोएन्जाइम बढाउनको सुरक्षा स्तर स्थापित गर्न गरिएको मानव अध्ययनले देखाउँदछ कि दैनिक आधारमा दैनिक १,००० मिलीग्राम देखि २,००० मिलीग्राम एनएडी + खुराकले मानिसहरूलाई कुनै हानिकारक प्रभाव पार्दैन।
यद्यपि त्यहाँ केहि केसहरू छन् जहाँ हल्का साइड इफेक्टहरू NAD + सेवनको कारण देखा परेको छ। यी प्रभावहरूमा मतली, अपच, टाउको दुख्ने, अत्यधिक थकान (थकान) साथै पखाला समावेश छन्
NAD + को बारेमा अधिक जानकारी
NAD + पाउडर, जुन NAD + पूरकहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, सेतो, hygroscopic र अत्यधिक पानी घुलनशील छ। को रासायनिक सूत्र NAD + पाउडर is C21H27N7O14P2.
यदि तपाईं प्रमाणित निर्माता हुनुहुन्छ र NAD + को लागी NAD + पाउडर मा रुचि राख्नुहुन्छ पूरक निर्माण, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई नक्कली किन्नबाट बच्नको लागि सम्मानित स्रोतबाट पाउनुभयो। तपाईंले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ कि तपाईं विश्वासयोग्य विक्रेतासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ जब NAD + पूरक खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि तपाई सजिलै NAD + पाउडर वा NAD + पूरकहरू अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
NAD + coenzyme एक अणु हो जसले मानव स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एनएडी + बेनिफिट्स, जसले राम्रो मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रतिरोध र डीएनए मर्मत समावेश गर्दछ, कोएन्जाइमको पूरकको साथ सम्बन्धित केही साइड इफेक्टहरू पछाडि। यसका साथै एनएडी + एन्टि aging एजिंग बेनिफिट भनेको केहि छ जुन उमेरका लक्षणहरूलाई मान्न नचाहनेहरूले एनएडी + पूरक मार्फत ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। जे होस्, यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ तपाइँको निकोटीनामाइड एडिनिन डिनुक्लियोटाइड / NAD + पाउडर वा NAD + पूरक प्याक एक विश्वसनीय स्रोतबाट पाउनुहुन्छ।
एन्डरसन आरएम, बिटरम्यान केजे, वुड जेजी, एट अल। एक आणविक NAD + बचाव मार्गको हेरफेर स्थिर राज्य NAD + स्तरहरू परिवर्तन बिना उमेर ढिलाइ गर्दछ। J Biol Chem। २००२ मे २;; २2002 (२१): १24१-277०।
गोम्स एपी, मूल्य एनएल, लिंग एजे, एट अल। घट्दो एनएडी (+) उमेरको समयमा आणविक-माइटोकोन्ड्रियल संचारलाई बाधित गर्ने स्यूडोहाइपोक्सिक अवस्थालाई प्रेरित गर्दछ। 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
ईमेआई एसआई, ग्वारेन्टे एल। एनएडी र वृद्धावस्था र रोगमा sirtuins ट्रेन्ड्स सेल बायोल।2014 Aug;24(8):464-71.
मूल्य एनएल, गोम्स एपी, लिंग एजे, एट अल। SIRT1 AMPK सक्रियता र mitochondrial प्रकार्यमा resveratrol का लाभदायक प्रभाव को लागी आवश्यक छ। सेल मेटाब। २००२ मे २;; २2012 (२१): १2१-15०।
सतोह एमएस, पोइरियर जीजी, लिंडाल टी। एनएडी (+) - मानव कोष निकासीले क्षतिग्रस्त डीएनएको निर्भर मर्मत। J Biol Chem। 1993 मार्च 15; 268 (8): 5480-7।
Sauve AA। एनएडी + र भिटामिन बी met: मेटाबोलिजमदेखि थेरापीहरूमा। J Pharmacol Exp Ther। 2008 Mar;324(3):883-93.
1. NAD के हो?
२. कसरी NAD काम गर्दछ?
The. लाभ / NAD को कार्य
The.अनुप्रयोग / एनएडी + को उपयोगहरू
N.NAD + खुराक
The. घट्ने NAD + स्तरहरूको परिणामहरू
H. स्वाभाविक रूपमा NAD + स्तर कसरी बढाउने?
8. केहि कारकहरू NAD घटाउने
I। के त्यहाँ एनएडी + को बारे मा कुनै साइड इफेक्ट छ?
१०. NAD + को बारेमा अधिक जानकारी